IPhone Zviteshi | Nhau dzePhone (Peji 4)
Aya anogona kuve mazita einotevera iPhone
Izvo zvinoita kunge ari mazita eiyo iPhone nyowani ayo Apple achaburitsa neChitatu chinotevera, pamwe nemitengo yavo, yakasvinwa.
Apple haizoshandise iyo yeminwe inzwa pasi pechidzitiro
Pakati pemwedzi yemitengo pakuratidzwa kweFace ID, pakanga paine runyerekupe rwakati Apple ne Samsung zvaive nematambudziko, Apple ichaenderera isingashandise iyo sensor pasi pechidzitiro, kugamuchirwa kuchave kwakakura kwazvo muiyo ecosystem yeAndroid. .
Apple Inovhura Yemahara Yekutsiva Chirongwa cheiyo iPhone 8s ine mamaboard Matambudziko
Zvese zvemagetsi zvigadzirwa zvine mhosva yekuputsa, munguva pfupi kana inotevera, kungave nekuda kwekushandisa kwavo kana nekuda kwekukanganisa kwekugadzira. Apple Vakomana vanobva kuCupertino vakagadzira chirongwa chitsva chekutsiva chevose iPhone 8 vane matambudziko nebhodhi reamai
Iyi ichave iri nyowani iPhone XS (yepamutemo Apple mifananidzo)
Mifananidzo yePhoen XS nyowani inosvinwa mavhiki maviri mushure mekuburitswa kwavo, ichisimbisa iwo maviri masizi uye nerudzi rutsva rwegoridhe
Zviri pamutemo: munaGunyana 12 tichaona iyo nyowani iPhone
Apple yakagadzira zviri pamutemo zuva rekuratidzwa kweiyo nyowani iPhone: Gunyana 12 na19: 00 pm muSpain uye kubva kuSteve Jobs Theatre
DigiTimes inofungidzira kuti Apple ichatengesa mamirioni 70-75 emamiriyoni eiyo nyowani iPhone
Ive nekuchengera ne data iro richangoburitswa muDigiTimes pane anofungidzirwa kutengesa manhamba emamodeli matsva ...
Iyo iPhone nyowani ichave nekuvandudzwa mukamera uye isina "Plus" muzita
Mark Gurman anotizivisa tarisiro yezvinogona kuburitswa neApple mune inotevera Keynote munaGunyana: matatu maPhones matsva ane akasiyana skrini.
Vhidhiyo yemaviri anofungidzirwa iPhone 6,1 uye 6,5 inches
Mushure memafoto ekutanga maungaona aya matsva iPhone 6,1 uye 6,5 inches ...
Yakazara-Inoshanda LCD skrini uye mashoma bezels eiyo iPhone 6,1 ″
Runyerekupe rwunoramba ruchisvika kunetiweki nezve maApple terminals matsva ayo achazounzwa mwedzi unouya ...
Iyo iPhone X yakarova imwe rekodhi, iya yekuve nemutengo wepamusoro mukutengesa kwechipiri ruoko
Uye chokwadi ndechekuti Apple's smartphone yatove inodhura zvakanyanya iyo kambani yatengesa ...
LG inosvika pachibvumirano neApple kupa OLED uye LCD skrini
Samsung yakave nerukudzo, kuidana neimwe nzira, yekuve mukuru uye ingangoita chete mugadziri wechidzitiro chekutanga iPhone ine OLED tekinoroji. Iyo inotevera iPhone modhi, zvinoita sekunge icha kwete chete ichagadzirwa ne Samsung OLED mapaneru, asi LG ichave imwe yevanopa, kunyangwe padiki padiki
Apple inotangisa 'Memory', iyo nyowani nzvimbo yekusimudzira iyo Face ID yeiyo iPhone X
Vakomana vanobva kuCupertino vanoda kuenderera mberi vachisimudzira Chiso ID cheiyo iPhone X munzira yepakutanga nenzvimbo nyowani yeMemory.
Ming-Chi Kuo anoti tichaona maPhones matsva mubhuruu, orenji uye mutsvuku
Makuhwa pamusoro peanogona kuve matsva mavara eiyo iPhone haasi zvachose matsva pakati pevaongorori uye mu ...
IPhone Error 53 inodhura Apple muAustralia $ 9 mamirioni
Apple's craze yekuunza software iyo inovhara shanduko dzinoitwa kuchishandiso nemvumo isingabvumirwe yakadhura iyo $ 9 mamirioni faindi yeAustralia.
Isu tinoona zvakare runyerekupe rweinotevera iPhone SE, Apple inodhura iPhone iyo inosvika ne6.1 inches, uye inozivikanwa notch yeiyo iPhone X.
Kuramba kwemvura kweiyo iPhone X kunotendera kuti irarame mavhiki maviri akanyudzwa murwizi
Pandinoona nhau dzeizvi handigone kubatsira asi kutarisa kumashure ndofunga nezve nguva idzo ...
Maawa mashoma WWDC pamberi paWWDC, Apple inodzoka neimwe nzvimbo ine Animoji Karaoke
Muchina wekushambadzira weApple unotanga kupisa maawa WWDC inotevera isati yatanga Keynote ine nzvimbo nyowani ine Animoji sevamiriri.
A "render" inoratidzika inofanidza zvinoita iyo iPhone LCD ine 6,1-inch skrini ingaite senge
Kana zvese zvikaenderera sezvakarongwa, tichava nemaPhones matsva munaGunyana. Uye imwe yadzo ichave iri 6,1-inch LCD iPhone. Heano ekupedzisira kupa pane iyi modhi
Gore rinotevera maPhones ese ane OLED skrini
Zvimwe zvisina kufanira zvinyorwa zvinotsigira izvo zvatave kukurukura kwenguva refu uye ndezvekuti Apple yaizoenda kumascreen ...
Huwandu hwevashandisi vane iPhone X kamera inoputsa iri kukura
Matambudziko ekutanga ane hukama neiyo iPhone X anotanga kusvika, matambudziko nekutsemuka kwegirazi reiyo kamera yekumashure.
Apple yaiziva matambudziko e "Bendgate" uye "Kubata chirwere" nguva refu vasati vabvuma
Zvinyorwa zvemhosva yakanangana neApple yezvinetso zve "Kubata chirwere" che iPhone 6 Plus zvinoratidza kuti kambani iyi yaiziva nezvedambudziko kare isati yazvibvuma.
Apple inodhinda vhidhiyo nyowani inoratidza iyo portrait modhi yeiyo iPhone X
Apple inodzokera kukakavara neimwe yeakanakisa maficha eiyo X X uye pakutanga: iyo portrait mode uye iyo "Portrait mwenje" basa
Runyerekupe rwe iPhone SE 2 ine dhizaini yakafanana neiyo iPhone X inodzoka nekuda kwekudonha kweimwe accessories
Mavhiki mashoma pamberi peWWDC inotevera kuvhurwa Keynote, runyerekupe rwe iPhone nyowani SE 2 ine skrini yakafanana neiyo iPhone X inodzoka nekuda kwekudonha kwezvishandiso kwayo.
Apple ingadai yakatumira denderedzwa kune avo vePrimiyamu Resellers, vane mvumo yekuparadzira, vachibvuma dambudziko nemaikorofoni eiyo iPhone 7.
LG inoti haina kuteedzera notch yeiyo iPhone X mu LG G7
Kambani yeKorea LG, inosimbisa kuti dhizaini yeG7 nyowani, iri refu isati yatanga iyo iPhone X, chirevo chakaitwa kune veKorea vezvenhau vachangopedza kuratidza mureza wayo mutsva.
Kukanganisa paApple kuti uwane mari yakawanda nekuchinja kwebhatiri?
Tine patafura imwe nyaya isinganzwisisike tichiziva nzira yekuita kweApple, asi isu hatigone kutaura ...
Amazon inogadziridza iyo application kuti ienderane neiyo skrini yeiyo iPhone X
Iyo Alexa application, iyo yatinogona kubata nekudyidzana neAmazon Echo smart zvishandiso, yakazopedzisira yagadziriswa kune iyo 5,8-inch screen ine notch yeiyo iPhone X.
CIRP inopa yayo iPhone data yekutengesa uye ivo vakapatsanurwa zvakanyanya
Sezvazvinowanzoitika nezviverengero zvekutengesa zveApple, mumwe nemumwe wevanoongorora anoti yavo, asi mu ...
Runyerekupe rwakawanda runosimbisa kuti iyo iPhone SE ichasvika mukati memwedzi waMay
Runyerekupe rwunotanga kuwedzera zvakanyanya: tichava ne iPhone SE itsva ine hunhu hwakafanana neiyo iPhone X, A10 chip, uye hapana minijack yekubatanidza.
Apple inonyoresa iyo nyowani iPhone SE mwedzi miviri pamberi peWWDC 2018
Nyowani EEC zvinyorwa zvinonongedzera kune iripedyo kuvhurwa kweiyo inogona kuve nyowani iPhone SE modhi inogona kusvika muna Chivabvu kana Chikumi
Samsung patents yekutanga "kopi" yeiyo iPhone X
Iyo yekuKorea tekinoroji hofori ingadai iine patent iyo ingave yayo inotevera smartphone. Chiteshi chitsva chine hunhu hwakafanana neiyo iPhone X, uye hongu, ichave iinewo notch inopokana.
Maitiro ekumisikidza rima maitiro pa Twitter
Imwe yemaapplication ekupedzisira ayo akasarudza kuwedzera iyo rima theme mukati mekugadziriswa kwayo ndeye Twitter, dingindira rakanakira raunoshandisa kana iwe ukashandisa application mune yakaderera mwenje.
Aya ndiwo maratidziro anoita iyo iPhone 8 (PRODUCT) RED senge yekutanga unboxings
Pasina mubvunzo chishandiso chakatangwa neApple neiyo nyowani tsvuku chinoshamisira, icho zvakare chinopa chikamu che ...
Dhawunirodha iwo ega ega mapikicha eiyo nyowani iPhone 8 (PRODUCT) RED
Tora iyo nyowani yakasarudzika Wallpaper yeiyo nyowani iPhone 8 (PRODUCT) RED iyo Apple yakatangisa mukubatana neRED, sangano rinorwisa HIV.
Mangwana unogona kutenga iyo iPhone 8 (PRODUCT) RED neiyo nhema kumberi!
Apple haina kumirira nguva ino uye runyerekupe rwakauya nezuro masikati ane ...
Chinonakidza chinopa chenguva yemberi yakakomberedza iPhone inotidzosera kuMatrix
Mazuva mashoma apfuura iyo nhau dzakapunzika mukati mayo mareferenzi akaitwa kune ramangwana rakakombama iPhone. Uye dhizaini Martin Hajek akatanga "yekutanga" yeiyi zano
Apple yaigona kuwana iPhone ine skrini inopindura kuita pasina kuibata uye iyo yakakombama
Apple yaigona kuwana iPhone ine skrini inopindura kuita asi pasina kubata iyo skrini. Zvakare, ini ndaizotora concave iPhone ine yakakomberedzwa skrini.
Hupenyu hwebhatiri hweiyo iPhone 8 Plus uye iPhone X iri pamusoro peiyo yeGlass S9 nyowani
Zvekare, zvese zviri zviviri iPhone 8 Plus uye iPhone X zvinopa kuita kwakanyanya kwebhatiri kupfuura iyo Samsung Galaxy S9 uye S9 +.
Iye 5,8-inch iPhone X mutsivi anogona kunge ari 10% akachipa
Chizvarwa chinotevera iPhone X ichave iri 10% yakachipa nekuda kwemitengo yakaderera yekugadzira.
Iyo yegoridhe iPhone X ingangove padhuze kuvhurwa?
Pasina kupokana iyi inogona kuva runyerekupe rwechokwadi patinoona trajectory yeiyo iPhone uye mavara ayo. Iphone…
Apple inokumbira angangoita mazana maviri nemakumi mapfumbamwe emapaneru eiyo anotevera maPhones
Chimwe chikamu cheiyo iPhone X chakakonzera matambudziko kuApple pakugoverwa uye kutengeswa kwayo pasina mubvunzo iri idzva ...
"Vhura nekungotarisa" ndiyo vhidhiyo nyowani yekusimudzira yeiyo iPhone X
Apple yakatumira vhidhiyo nyowani pane yayo YouTube chiteshi uko kwatinoona, mune toni yekuseka, mashandiro eFace ID
Ongororo nyowani neLoup Ventures, inovavarira kuziva kana uchachinja yako iPhone mukudonha
Ongororo uye vaongorori vari pane fever fever mwedzi ino uye mune iyi kesi tinoda kuratidza ongororo ...
VaCiti vaongorori vanopa zvakaipisisa zvekutengesa kweiyo iPhone X
Uye ndezvekuti kune akati wandei maongorori mafemu atiri kupa parizvino nhamba yekutumira uye fungidziro yekutengesa ...
Zvino izvo munhu wese zvaanozviteedzera, iyo "notch" inogona kutsakatika pane iyo 2019 iPhone
Zvipingamupinyi zvehupenyu uye ndezvekuti mushure mezvakawanda zvekuti dhizaini nyowani yeiyo iPhone X yaifanira kutaura nezve ...
Iyo iPhone X, Apple Park uye zvinorova zvinopesana nemahwindo ayo. Zvese zvakanyorwa ...
Uye hapana nzira yekuve nenguva yakawanda muhupenyu huno kuti uwane izvi zvinoratidza izvo ...
Sei vanhu vasingatenge maPhones matsva? Mhinduro iri nyore, nekuti iyo yavanayo inovashandira.
Nguva zhinji tinoomesa hupenyu hwedu tichifunga nezve zvikonzero zvinogona kutungamira mushandisi kana vashandisi kufunga ...
Iwe unoda kuona kuti mashandiro e iPhone yako anodonha kana bhatiri risiri pa100%? Heino vhidhiyo inoratidza yekutanga uye shure mushure mekutsiva bhatiri
Munguva yeMobile World Congress yakaitirwa muBarcelona, ​​mukati mevhiki imwecheteyo mibairo yakapihwa kune ...
Mutsva makuhwa anoti Samsung iri kucheka huwandu hwemapaneli eOLED yainoita iyo iPhone X
Chirevo chitsva, panguva ino kubva kuBloomberg, zvakare chinotaura kuti Samsung yaifanirwa kucheka pane OLED mapaneru ekugadzira iyo iPhone X
Chekutanga pfungwa yezve iyo iPhone X Plus yaigona kutaridzika
Isu tinokuratidza iyo yekutanga vhidhiyo kupa, yekuti ingaenzaniswa sei neazvino iPhone X, inotevera iPhone X Plus, kana ikazopedzisira yatanga pamusika maererano neruzivo rwakaburitswa mazuva mashoma apfuura neBloomberg.
Notch kana kwete notch?
Mushure mekuratidzwa kweiyo iPhone X neApple, vamwe vese vagadziri vakafanirwa kusarudza kuti voshandisa notch here, nezvakanaka nezvayakaipira.
Apple yaizounza maPhones matatu matsva gore rino
Apple iri kuronga kuunza matatu matsva emhando dze iPhone gore rino. Iyo yakavandudzwa modhi yeiyo iPhone X, yakakura modhi uye yakachipa imwe.
Apple kutora chikamu muIsrael Machine Vision Musangano semubatsiri
Apple ichataura kuIsrael Machine Vision Musangano. Hurukuro yake ichave inoenderana nekamberi kamera yeiyo iPhone X uye mashandisiro ayo tekinoroji.
Kuenzanisa pakati peiyo nyowani Samsung Galaxy S9, iPhone X, iPhone 8 uye iPhone 8 Plus
Kana iyo Samsung Galaxy S9 iri yepamutemo, tinokuratidza fananidzo umo matinoona zvese zvakatemwa zveGPS S9 uye Galaxy S9 + neiyo iPhone X, iPhone 8 uye iPhone 8 Plus
Aya ndiwo mabudiro akaita Apple mhedzisiro mu 'Portrait Mwenje' basa reiyo iPhone X
Apple inowedzera vhidhiyo nyowani kune yayo YouTube chiteshi. Uye zvinoita saizvozvo nekutsanangurira mushandisi kuti akawana sei 'Portrait Lighting' basa reiyo iPhone X
Iyo iPhone SE 2 yaizodhura kupfuura iyo yazvino modhi, maererano nerunyerekupe
Runyerekupe nezve iyo iPhone SE 2 inoonekwa zvakare, imwe yeanotarisirwa mavhezheni egore rino 2018. Mune ino kesi, iyo inogona kutanga mutengo inoratidzwa
Iye zvino isu tese takamirira Apple kuti ivhure zvimwe zvese zvishandiso izvo zvichiri kuuya mukugadzirwa kweiyo ...
Samsung ine akawandisa OLED mapaneru nekuda kwekuderera kwepasi kwe iPhone X, sekureva kwaNikkei
Nikkei Asia Ongororo inodzoka nemakuhwa kuti iyo iPhone X haisi kutengesa sezvaitarisirwa. Uye izvi zvakakanganisa Samsung nezvikamu zvayo zveOLED
Strategic Analytics Inoti Apple Yakagadzira Mari Yakawanda Kota Yekupedzisira Kupfuura Mamwe Makambani Pamwe Pamwe
Kudiwa kwakasimba kwemamodeli matsva e iPhone X kubva kuApple kwakawanikwa mukati mekota yekupedzisira uye kubvira ...
Iyo inotevera 6.1-inch iPhone inotarisirwa kutengesa kunge hotcake
Iko mukana wekuti Apple izovhura nyowani 6.4-inch iPhone modhi, iyo nyowani iPhone Plus iyo inosvika muna 2018, inonzwika zvakanyanya uye zvakanyanya.
Apple ingadai yakatumira mvumo kune ayo ese ekugadzirisa nzvimbo kutsiva chero 5Gb iPhone 16c yavanogamuchira nemhando yepamusoro 32Gb.
Dhipatimendi reMapurisa reNew York rakatanga kuchinjisa Windows Phone Nokia yavo yechinyakare ye7 uye 7 Plus.
Inowedzera huwandu hwevashandisi vanowana matambudziko neiyo iPhone X pavanogamuchira mafoni
Dambudziko idzva rakatarisana neiyo iPhone X rine chekuita nescreen, skrini isingabatike kana vashandisi vatambira nhare, izvo zvinovatadzisa kugona kuvadaira.
Muna 2016 matambudziko akaonekwa mune mamwe maApple 7s mushure mekuisa iyo ndege ndege. Iko kufukidza hakuna kuonekazve. Apple inogadzirisa dambudziko iri makore maviri gare gare
Ivo vakomana vanobva kuCupertino vari zvakare kucherechedzwa nekusimudzira iyo nyowani portrait modhi yeiyo iPhone X pachiitiko cheRio Carnival.
Apple inoshamisika paGrammy gala ine mbiri animated karaoke naAnimojis
Ivo vakomana veCupertino vanoita yavo stellar kuonekera paGrammy Awards vaine mbiri nyowani karaoke mavara anotarisana neanozivikanwa Animoji.
Makuhwa anopfuurira nezve iyo 6,1-inch screen iPhone modhi iyo inoshandisa LCD paneli pane yeOLED imwe. Sezviri pachena ichave iine resolution yepamusoro kupfuura zvakajairwa
Chishandiso chinotevera paapuro chinganzi iPhone XI, iyo mbiri SIM kifaa ine kuwedzera kwescreen nekudzora mabheziri uye notch.
Wepamusoro 5 akanakisa maX X maficha
Kana iwe usati uine chokwadi kana iyo iPhone X iri iyo terminal yauri kutsvaga, saka tinokuratidza kuti ndeapi ane epamusoro mashanu akanakisa maficha eiyo X X
Tim Cook anoshamisika uye anopa hurukuro yake kuDuke University kuburikidza neAnimoji
Tim Cook anotevera mutsoka dzaSteve Jobs uye anotora chikamu mukupedza kudzidza kweDuke University, uye chinhu chakanakisa ndechekuti chiziviso chakachiita chikave Animoji.
Chiziviso chazvino cheiyo iPhone X chinotarisa pane sarudzo dzainotipa isu kuti titore ma selfies
Mukuzivisa kweApple kutsva, kusimudzira iyo iPhone X's selfie modhi yegumi nemana nguva, tinogona kunzwa mazwi ekumashure aMuhammad Ali.
Iyo iPhone 8 yakatengesa zvirinani pane iyo iPhone X mukota yekupedzisira yegore
Chidzidzo chinoburitsa kuti muUnited States iyo iPhone 8 yatengesa zvakapetwa zvakapetwa kaviri seiyo X X, aine mhando dzekare dzichiri kutengesa nemutengo wakanaka.
Ivo vakomana veCupertino vanotumira gwara kune vavanopa kuti kubva munaKurume vatorere iyo isina kusimba iPhone 6 Plus neiyo iPhone 6s Plus modhi.
Musika weChinese ndeimwe yezvakakosha kune chero tekinoroji kambani inokoshesa munyu wayo. Apple yaita zvakanaka, uye mukati megore ra2017 ndeimwe yevanotengesa zvakanyanya
Apple yakatumira vhidhiyo nyowani pane yayo YouTube chiteshi uko inosimbisa, zvakare, hunhu hunopihwa neiyo portrait modhi yeiyo iPhone X
Noa N10, imwe chiChinese smartphone inojoinha iyo "notch" mota
Uye ndezvekuti kunyangwe chiri chokwadi kuti havazi vese maChinese vanogadzira nhare vanogadzira maficha ...
Iwe unofunga Face ID inoshanda nemazvo chaizvo? TrendForce inoti ichine nzvimbo yakawanda yekuvandudza
Iyo tekinoroji yakasimba TrendForce, ndeimwe yeavo vanoyambira nezvekuvandudza kwakanyanya muApple's ID ID yeiyi ...
Ndeipi skrini inotsva pamberi, iyo iPhone X kana iyo Samsung Galaxy Note 8?
Dzakawanda idzi dzidziso dziri kuvhurwa pamambure nezve mukana wekuti iyo iPhone skrini ...
LG ichave inogadzira iyo OLED skrini yeinotevera iPhone X Plus
2018 richava gore reiyo nyowani iPhone X Plus uye zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti LG ichave inogadzira iyo nyowani hombe OLED skrini yeinotevera Apple Plus.
Satechi anotipa iyo premium isina waya yekuchaja base nemutengo wakanaka
Satechi inotipa isina waya yekuchaja base ine dhizaini yakanaka uye yekutanga-kirasi zvinhu senge aluminium. Izvo zvinoenderanawo nekukurumidza kuchaja kweiyo iPhone X, 8 uye 8 Plus.
Chizvarwa chechipiri cheiyo iPhone SE chaigona kusvika pamberi peWWDC 2018
Chizvarwa chechipiri cheiyo iPhone SE chaigona kusvika pamusika mukati mehafu yekutanga yegore ra2018, iine dhizaini imwechete asi Hardware iripo parizvino mu iPhone 8
Iyo iPhone X yakachipa zvishoma muna 2018?
Kwete, isu hatisi kutamba imwe yemajokes chaiwo atingaverenga zuro munaZvita 28, takatarisana ...
Iyo iPhone X inogona kukushandura iwe kuita murume asingaonekwe
Iwe waizofungei kana tikakuudza kuti iyo iPhone X inogona kukuita usingaonekwe? Zvakanaka, izvi ndizvo zvakagadziriswa neJapanese uye anozviratidza muvhidhiyo
Dhawunirodha iwo mapikicha pamwe nekugadzirwa kwescreen yeiyo nyowani iPhone X
Tongedza, uye ratidza yako nyowani iPhone X nemamwe mapikicha eBlueprints nedhizaini reiyo skrini yeiyo nyowani X X
Iwe haugone kubvumidza kutenga kwemwana wako kuburikidza neFace ID
Ichi chinhu chandakaona kubva pandiri kushandisa iyo iPhone X, asi izvo ...
Iyo yakanakisa Optical kugadzikana sisitimu yeiyo smartphone iri muGalaxy Note 8
Iyo yakanakisa Optical kugadzikana sisitimu mune ye smartphone, tinogona kuiwana muGlass Note 8
Vanomhan'arira Apple yekudzora pasi zvishandiso zvine mabhatiri ekare
Vashandisi veUS vanokwidza Apple pamusoro pematambudziko ari kukonzerwa nemabhatiri ekare.
Iyo iPhone X yaizove ichikurudzira shanduko yemidziyo yenhare muChina
Iyo itsva iPhone X inogona kuve nemhosva kune vakawanda kumutsiridza yavo yekare iPhone pamberi penguva, kunyangwe yevamwe kuti vatamire kubva kuAroid kuenda kuIOS.
Ipuratifomu inozivikanwa yekugovana mifananidzo uye mifananidzo Flickr, inoburitsa segore rega ichipedzisa pfupiso diki yemidziyo iyo ...
Tine mwedzi yakati wandei neiyo nyowani iPhone X inowanikwa uye pasina mubvunzo imwe yemabasa akawedzerwa ayo ...
Nguva dzekutumira dze iPhone X dzinoramba dzichidonha mune dzimwe nyika
Iyo iPhone X inoenderera ichiona nguva dzekuendesa dzichideredzwa mune dzimwe nyika, kunyangwe ichivepo yekutakura ...
Iyo iPhone X ye2018 yaizove nekuzvimiririra kwakawanda nekuda kwebhatiri nyowani mu'L '
Iyo iPhone X 2018 ichave iine bhatiri yakawanda, sekureva kweazvino runyerekupe. Apple ichabheja pane nyowani bhatiri dhizaini iyo ingangotora mukana wepamusoro wekugona
Iyo iPhone X ikozvino inogona kutengwa mahara uye isina SIM muUS
Uye ndezvekuti muUnited States haukwanise kutenga zvishandiso sezvatinoita muno muEurope, mahara zvachose….
IPhone X nguva yekutumira inodonha kusvika kumazuva mashanu
Zvishoma nezvishoma zvinoita sekunge vese vashandisi vaida kutenga iyo nyowani iPhone X vatove nayo mu ...
Ivo vanoita mask nyowani kutenderedza iyo ID ID yeiyo iPhone X
Uye ndezvekuti vamwe vachiri kutsunga kuti chengetedzo yeiyo nyowani iPhone X Face ID sensor iri nyore ...
Apple inotangisa 4 matsva matsva neFace ID uye animojis sevapikisi
Apple yakaburitsa 4 mavhidhiyo matsva ane hukama neiyo iPhone X uye kunyanya iyo Face ID uye mashandiro ayo munzvimbo dzakasiyana dzezvakatipoteredza.
Dhawunirodha ese epakutanga Apple mapepa akachinjirwa iyo iPhone X
Tora iwo mapikicha mapikicha ezvinyorwa zvekare zveIOS zvakanyatsoenderana nezvitsva zvitsva zveiyo iPhone X.
Oppo R13, vagadziri veChinese vanodawo iyo iPhone X
Chinese vagadziri vari kutanga kureva kune zvese zvakanaka nezvakaipa zveiyo iPhone X dhizaini yeavo mafoni matsva.
Iyo iPhone X kamera inoda mwenje mushoma kutora yakanaka mafoto
Kuyedzwa pane kamera kunoitwa kwemarudzi ese pa iPhone uye zvishoma kana hapana chinotiza ...
Iyo iPhone X yatovepo mune dzimwe nyika gumi nenhatu
Iyo yazvino uye nyowani nyowani mhando yefoni mbozhanhare yaApple, iyo inoshandura iPhone X, yakagara zviri pamutemo mune dzimwe nyika gumi nenhatu neChishanu, 24
Nhema Chishanu inouyawo kune iyo iPhone nezvikuru zvakaderedzwa
Amazon inotipa maPhones matsva pamitengo yakaderera zvakanyanya kupfuura muchitoro chepamutemo chete mukati memaawa makumi maviri nemana eBlack Friday
IPhone X Inofungidzirwa Kutumira Nguva Inoramba Ichidonha
Iyo yekufambisa nguva yeiyo iPhone X yakaderedzwa zvakanyanya uye parizvino yakaiswa pa1 kusvika kumavhiki maviri
Runyerekupe runooneka pamambure nezve kutanga kwekugadzirwa kweiyo iPhone SE 2
Hatisi kuzotaura kuti ino inguva yekutanga kuona makuhwa achionekwa nezve kuvhurwa kana kutanga kwe ...
Waizviziva here kuti Face ID inonyaradza mafoni uye inoderedza iyo alarm toni nekungotarisa iyo iPhone?
Iyi ndeimwe yemabasa ayo iyo nyowani uye inoshamisa iPhone X inotipa uye uye sezvazvinoitika mu ...
Kukamurwa kweApple kwePortrait Mwenje
Old iPhone kamera portrait mode mapikicha haigone kuwedzerwa uchishandisa iyo nyowani iPhone x mwenje mhedzisiro.
FullVision skrini, fashoni kana kuita? Izvi ndizvo zvinoita seIPhone SE-X
Iyo FullVision skrini inoshanda chaizvo kana ndeye fashoni? Ngazvive sezvazviri, zvese zvinoratidza kuti musika unotevera nzira iyi. Izvi ndizvo zvaizotaridzika kunge iPhone SE-X
Tora mukana wekupa kwaYoigo musi weChishanu Chishanu kuti utore iPhone X
Yoigo akagadzirira chipo chakakosha kwazvo kwatiri kuti tikwanise kuwana iyo iPhone X mazuva pamberi pemhemberero yeChishanu Chishanu
Iyo iPhone X inopedza kuchengetedza mumaminetsi matatu mudunhu reSamsung
Hatigone kuti budiriro yakawanikwa neiyo nyowani Apple iPhone X ndechimwe chinhu chenguva pfupi, kubvira ipapo ...
Magazini yeTime yakafunga nezve iPhone X seimwe yeakanakisa zvigadzirwa zvegore izvo isu tave kuda kupera.
Apple inovhara mamakisi pane kushandiswa kweAnimoji mune yekare iPhone mamodheru
Uye ndeyekuti svondo rino nhau yakauya kunetiweki nezvekushanda kweiyo TrueDepth kamera ye ...
Totallee inoratidza yayo nyowani kuunganidzwa kwematambudziko eiyo iPhone X
Iyo iPhone X inogona kutaridzika yakakura neaya matsva makesi kubva kuTotallee, yekutanga kuCalifornia ine kuunganidzwa kutsva kwezviitiko zvaro zvakatetepa.
Kutumira nguva kunodonhedza iPhone X zvakare
Ino nguva nguva dzekutumira dzeiyo nyowani iPhone X modhi dzinoenda pasi zvakare uye ino nguva ...
Nhau dzinoita senge dzechokwadi uye ndedzekuti amai vanorekodha nemwanakomana wavo wemakore gumi-zvakateerana izvo ...
Kana iwe uri mugadziri iwe unogona kunge uchifarira hunyengeri uhwo Apple inowedzera muWebKit
Zvinoita sekunge izvo zvitsva zveIOS 11.2 zvinoramba zvichiratidza zvinonakidza mamiriro uye mune iyi nyaya zvine hukama nevagadziri….
Xtorm Rusununguko nekukurumidza kuchaja isina waya base, kune yako iPhone 8, 8 Plus uye X
Xtorm Rusununguko inotipa isina waya yekuchaja base inoenderana neApple yekukurumidza kuchaja kwedu iPhone 8, 8 Plus uye X
Imwe yeakanyanya kukosha maitiro nezve aesthetics yeiyo iPhone X hapana mubvunzo iyo Notch yatinogona ...
Ichokwadi ndechekuti chinhu chakaomesesa kuita uye icho chatove chakanaka uye ...
Apple ichabvisa Samsung pachigaro nekuda kwekusimudzira iyo iyo X X ichaipa
Apple ichabvisa chigaro Samsung senyika huru kwazvo inogadzira nharembozha nekuda kwekusimudzira iyo ichagamuchira kubva kune iPhone X kutengesa.
Uku ndiko kukundikana kwakanyanya kweiyo iPhone X
Tichaongorora zvakakanganisika zvakajairika uye zvikanganiso zvatinogona kuwana mune zvisina kukwana iPhone X zviyero.
Iyo iPhone X haifariri kutonhora, tinopa iyo «Coldgate»
Vamwe vashandisi 'iPhone X inomira kushanda kana yaoneswa kune yakaderera tembiricha, bug iyo Apple yatove kuziva nezvayo uye ichagadzirisa munguva pfupi
Iyo iPhone X ine maspika ari nani pane iyo iPhone 8 Plus
Uye kana paine chimwe chinhu chakavandudza iyo iPhone munguva dzichangopfuura, zviri pachena iri kurira. Little to…
Vanotarisana neye iPhone X kamera ine Panasonic Lumix GH5 kamera
Pasina mubvunzo kamera yeiyo nyowani iPhone X modhi inoshamisa, sezvakaita iyo nyowani ...
Apple ichangobva kuzivisa kuwanikwa kweiyo iPhone X munyika gumi nenhatu, nokudaro ichiwedzera kuwanikwa kwezvakafanana munenge pasi rese.
Iyo "notch" yeiyo nyowani iPhone X hapana mubvunzo chimwe chinhu chisingagoni kudzivirirwa sezvo ichigara mune yayo ...
Zvinodhura Apple kugadzira iyo iPhone X isingasviki € 350
Vaongorori vanofunga kuti zvinodhura iyo Cupertino kambani isingasviki € 350 kugadzira yega yega iPhone X iyo yavakazoisa pakuratidzira kweinosvika € 1.159.
Yekumhanyisa bvunzo pakati pe iPhone X uye Galaxy Note 8
Mwedzi yakati wandei yapfuura vhidhiyo yakaburitswa umo isu taigona kuona kuyedzwa kwe "chaiyo kumhanya" pa ...
Ungade here kushandisa Animoji iyo Apple inopa muMessage zvakazvimiririra? Zvakanaka, mugadziri akakwanisa kugadzira app ...
Iyo iPhone X ndiyo yakapusa iPhone kupaza munhoroondo
Sezvineiwo, iine iPhone X isu takatarisana neyakaipisisa iPhone yakambogadzirwa nekambani yeCupertino.
Iyo iPhone X ine yakanakisa uye yepamberi skrini pamusika
DisplayMate yakaongorora iyo skrini yeiyo iPhone X uye inopedzisa kuti ndiyo yakanakisa skrini iyo yati yamboedza, ichiuya kuyera seyakakwana.
Iyo iPhone X inowana akanakisa mamaki mukutora mifananidzo kunoitwa nechero ipi smartphone, kunyangwe zvisiri zvakanyanya muchikamu chevhidhiyo.
Ehezve, kuvhurwa kweiyo nyowani iPhone X mamodheru akave nekusangana nesimba paNovember 3 ...
Samsung inozvirumbidza pamusoro pezvakanaka zvematerminal ayo achienzaniswa neiyo iPhone
MaKorea anobva kuSamsung vakatumira pawebhusaiti yavo yeYouTube vhidhiyo nyowani iyo yavanotiratidza hupenyu hwemushandisi kubva kune yekutanga iPhone
iFixit inopa iPhone X 6 kubva pagumi yekugadzirisa
Ivo vakomana veIFixit vakatobvarura iyo iPhone X kuti vaongorore kuomarara kwayo kana zvasvika pakugadziriswa kana paine kuputsika.
Muvhidhiyo iyo yatinokuratidza mune ino chinyorwa, tinogona kutarisa kwete chete kana iyo iPhone X yakakotama, asi zvakare sei kusagadzikana kuri kukwenya.
Apple inopa mamwe mikana yekuunganidza kubva kuApple Chitoro pawebhusaiti yayo
MuApple Store Online tichakwanisa kuziva kuti ndezvipi zvimwe zvitoro zviri padyo zvinopa zvakafanana mazuva ekuendesa kuti tikwanise kutora yedu iPhone X
Mushure mekuburitswa kweiyo iPhone X, iyo Animoji yave protagonists yemavhidhiyo nekutamba kwese kwaungafungidzira rwiyo.
Apple inotangisa vhidhiyo nyowani inotsanangura mashandiro eiyo iPhone X kuitira kuti tikwanise kuona mashandiro matsva echigadzirwa.
Apple yakaburitsa beta yechipiri yeIOS 11.2 inoenderana neiyo iPhone X, kuitira kuti vashandisi vadzorere kopi yeiyo yavo yekare iPhone kune iyo nyowani.
Iwo ekutanga mayunitsi atove pamusika, isu tinokupa iwe yakanakisa ongororo yeiyo iPhone X, chinongedzo chakagadzirirwa kushandura nhoroondo yenhare.
Varume vatatu vane hooded vakaba vanodarika mazana matatu eX iPhone kubva kuUPS yekuendesa rori iyo yanga yakarongerwa kuvaendesa kuApple Store.
Mune ino kesi kwave kusiri iko kuputswa kwepamutemo kunoitwa neIFixit, asi ichiri kuratidza. Sezvo nemunhu wese ...
Zvirongwa zveApple zveiyo iPhone X zvaifanira kuvhura iyi modhi neyakajeka skrini muna 2018, asi ivo vaida kufambisira mberi kuratidzwa kwayo negore.
iPhone X 64 GB 200 euros yakachipa yekutenda kuna Yoigo
Kana usati wafunga chete kutenga iyo iPhone X, nekuti inodarika iyo chipingamupinyi chipingamupinyi che1000 euros, pamwe kupihwa kwaYoigo kuchakuita kuti uve nekurwadziwa.
Mitsara mikuru yadzokera iyo iPhone X
Mutsetse uripo zvakare pamberi peApple Stores kutenderera pasirese isati yatanga kuvhurwa kweiyo iPhone X
IPhone X kutumira kwakaderedzwa kusvika kumavhiki 3-4
Uye hazvingagone kuve kuti zvakagara kwenguva refu neaya mavhiki mashanu kusvika matanhatu ekuendesa nguva uye riini ...
"Kufungisisa", iri izita rerunyararo rweiyo iPhone X
Chinhu chakakosha apa ndechekuti Apple yawedzera irineti yega ye iPhone X inonzi Reflection, tichakuratidza.
Iyo iPhone X Yakaderera Mutengo inogona kunge isina yekumashure Yechokwadi Kudzika 3D kamera
Kuchengetedza mutengo, Apple yaizobvisa yakaderera mutengo iPhone X Yechokwadi Kudzika 3D kamera nekuda kwemamwe maficha.
Apple inoti haina kumbobvira yashanda pane in-kuratidza yeminwe yekunzwa
Mushure merunyerekupe rwakawanda, chokwadi ndechekuti haana kumbobvira akashanda pakuitwa kwechirongwa chekuverenga zvigunwe zveminwe chakabatanidzwa muchiratidziri.
Steven Levy, mumwe wekutanga kuyedza iyo yekutanga iPhone, inotaura nezve iyo iPhone X
Iyo iPhone X yave kuda kuenda kutengeswa uye ongororo dzekutanga dziri kuoneka pamambure. Imwe yeaya ongororo yakaitwa naSteven Levy.
Ko iyo X X Chiso Chiso ID Inopasa Mapatya Bvunzo? Pano tinosiya vhidhiyo chaiyo
Uyu wanga uri mumwe wemibvunzo yakabvunzwa nemumwe wedu pavakapa modhi nyowani ye ...
Iyo iPhone X ine Reachability basa, sezvataona mushure mekutanga ongororo dzakaburitswa neichi chishandiso.
Sarudzo yekuvanzika iyo yatovepo asi vashoma vanoziva ichagadziriswa nekusarudzika paiyo iPhone X uye haizobvumidze chero munhu kuona edu maazisi
Uye ndeyekuti iyo iPhone 8 uye iPhone 8 Plus vane mukwikwidzi wakaisirwa neApple pachayo, ...
Zvinotaridza kuti Apple iri kuneta nekuenderera mberi kwekubuda kwemavhidhiyo nemifananidzo yeiyo iPhone X uye yakavharidzira iyo activation kudzamara yasvika pamusika.
Yegore rinouya iPhone inoshandisa imwechete Face ID sensor seiyo iPhone X
Hatisi kuzoona chizvarwa chinotevera cheFace ID gore rinouya, sekutaura kwemuongorori Ming-Chi Kuo, saka tichafanirwa kumirira kusvika 2019
Iko stock yeiyo iPhone X yatove muzvitoro, yekutanga mifananidzo
Tichatarisa kurongedzwa kweiyo iPhone X uye aya ekutanga mayuniti atichakwanisa kuona muzvitoro zvese mubhokisi uye kunze.
Zuva rimwe chetero iro vhidhiyo rakatumirwa nemwanasikana weinjiniya weApple, yakanyorwa muchikamu cheApple Campus, yakaenda kuhutachiona, akadzinga mainjiniya.
Apple iri kufambisira mberi mazuva ekuendesa eiyo iPhone X
Nezuro, Chishanu, Mbudzi 27, kusungirirwa kweiyo iPhone X kwakatanga, iyo nyowani Apple foni, uye senge zvese ...
Dodocool desktop charger neQI, imwe yesarudzo dzakanakisa ye iPhone yako nyowani
Isu takaedza iyo itsva Dodocool desktop charger neQI, chaja nyowani kune chero munhu anoda waya isina waya pane yavo iPhone 8 uye iPhone X.
Belkin atove nevachengeti vema skrini anotengeswa muchitoro cheApple
Pane webhusaiti yeApple isu tatova neiyo itsva X X yekuchengetedza uye kuwedzera kune izvi ivo vanowedzerwa ...
Apple Inoti Kudiwa kwe iPhone Xs Kure Pamusoro Pezvavaitarisira
Mashoko ekutanga eApple nezve kutanga kwekuchengetwa kweiyo nyowani iPhone X angave ari pamusoro kunyangwe ...
Zviuru zvekuchengetedzwa kwe iPhone X zvinoreva kuti kutumirwa iko zvino kuri mumavhiki mashanu ne5
Pasina mubvunzo uku kutanga kwekuchengetedzwa kweiyo nyowani iPhone X modhi yakapfuura nematanho akati wandei pakati pezviuru zve ...
Ko iyo iPhone X ichave nechidzitiro chakatsva seGoogle Pixel 2? Uyu mubvunzo unotarisirwa kubvunzwa nevatengi vemunguva yemberi.
Isu tinopa imwe yesarudzo dzakanakisa kubhadharisa yedu nyowani iPhone X kana iPhone 8, iyo Dodocool isina mota charger.
Pamberi pekupomerwa kwakakomba kwaBloomberg, Apple yakapindura nekuramba pachena kuti yakaderedza kuvimbika kweFace ID yayo
Chirevo hachina kupatsanurwa zviri pamutemo neApple pachayo uye kambani haina kutaura nezve ...
Vhidhiyo yechiratidzo chekutsvaira kuti uchinje pakati pekushandisa pane iyo iPhone X
Uye ndezvekuti mushure mekuona kuti vamwe vashandi veApple nemhuri dzavo vanga vasisina kuchekwa pakuratidza ...
Maviri matsva Apple mavhidhiyo anoratidza iyo portrait modhi yeiyo iPhone 8 Plus
Apple ichangobva kuwedzera kune akanyorwa mavhidhiyo pane yayo YouTube chiteshi, maviri mavhidhiyo matsva umo ...
Uye ikozvino Apple inouya uye inotiudza kuti ivo vanozove ne stock ye iPhone X munaNovember 3
Kana zvese zvave kupandukira uye vaongorori vachifungidzira kushomeka kwechigadzirwa pazuva rekutanga / kuchengetedza kwe ...
Iwo maQi Wireless majaja akaunganidzwa nemotokari mhando anowirirana neiyo iPhone 8
Uye ndezvekuti iyi induction yekuchaja tekinoroji mumota dzazvino dzemamwe mabhureki yave ichiwanikwa ...
Brooke Amelia Peterson, youtuber inotitaridza iyo iPhone X kubva mukati meApple Campus
[Isu tinogadzirisa kuti tiwedzere iyo yakazara vhidhiyo zvakare] Iyi nhau ndinokutendai kubva zvamakatizivisa nezve ...
Chidzidzo chinoburitsa kuti iPhone 8 yekutengesa iri pazasi peiyo iPhone S mamodheru
Mune ino kesi isu tiri kutaura nezve mushumo kubva kune Consumer Intelligence Research Partners, CIRP. Kunyangwe chiri chokwadi kuti tine ...
Kufananidza kwekudzivisa kuwira pakati peiyo iPhone 8 Plus neGoogle Pixel 2 XL
Muvhidhiyo inotevera, tinokuratidza kuti kana iyo iPhone 8 Plus kana iyo Google Pixel 2 XL ichiramba zvakakwana kudonha
Pixel 2 XL skrini inogamuchira barrage yekushoropodzwa
Chidzitiro chePixel 2 XL chinopa kumwe kusarongeka nemavara uye zvinokanganisa zvakafanana kana uchizvitarisa kubva kune mamwe makona asingadi zvachose.
Vhidhiyo nyowani inotitaridza chena iPhone X
Vhidhiyo yeReddit inotiratidza iyo White iPhone X iri kushanda, ichikwanisa kuona iyo dhizaini dhizaini yayo marongero mhenyu
Angela Ahrendts haadi kumanikidza kutengesa kweiyo iPhone X
Zviratidzo zvekutanga zvaAngel Ahrendts zvinosvika nezvenzira iyo vashandi veApple vanofanirwa kuzvibata neiyo iPhone X.
Apple inoruma meno ayo nekugadzirwa kweiyo iPhone X
Nguva yakakosha yekugadzirwa kwemhando nyowani dzeApple, iyo iPhone X inozotengeswa ...
Sangano reNational Association of Broadcasters (NAB) rinomanikidza kuti Apple inofanirwa kumisikidza iyo Chip chip yakavakirwa mune yayo iPhone 7 uye iPhone 8 zvishandiso.
4K 60fps kurekodha pa iPhone 8 inoderedza mhando yevhidhiyo
Vakomana vanobva kuAppleInsider vatiratidze muvhidhiyo kuti mhando yemavhidhiyo ari 4k pa60 fps yakaderera sei pane mavhidhiyo akanyorwa mu4k pa30 fps
2018 richava gore rakakura reiyo iPhone uye zvese nekutenda kune iyo iPhone X
Uye ndezvekuti kunyangwe zvingaite senge gore rino richava rakasimba mukutengesa kweiyo iPhone ye ...
Iyo iPhone X nyowani yatanga kusvika mune yekutanga Apple Stores nepo kugadzirwa kwawedzera zvakanyanya mumavhiki apfuura.
Tsvaga zvemukati meese iPhone mamodheru nekuda kweiyo infographic kubva kuBloomberg
Vakomana vanobva kuBloomberg vanotangisa saiti ine inopindirana infographic kwatinogona kuona rese ruzivo rwehardware yema iPhone mhando.
Kana nerunyerekupe nezve matambudziko angave ari kunonoka kugadzirwa kweiyo nyowani iPhone X, yakawanda ...
Izvo zvinofanirwa kujekeswa kuti mhando iyi yemuyedzo inoitwa mune yega yega kuvhurwa uye kunyangwe zvakaoma kuona izvi ...
Sezvo mazuva achifamba, tiri kuona maApple ari kugadzirisa mamwe mabugs akawanikwa kubvira yekutanga beta yeIOS 11
Idzi shanduro dzinoratidza kuti 6,4-inch iPhone X Plus yaizotaridzika sei
Vamwe vagadziri vakagadzira izvo zvinoratidza izvo iyo iPhone X ingaratidzika senge ine 6,4-inch screen iyo inogona kuona mwenje wezuva rinotevera gore.
Bazi rinodzora rekufona muUnited States, rakapa mukana wekutungamira kuitira kuti iyo iPhone X itengeswe pasina matambudziko.
Isu tinoziva zvimwe zvakawanda nezvekuti iyo iPhone X skrini inotaridzika sei uye sei zvimwe zvinhu zvakaita sekukiya skrini kana nzvimbo yekudzora inogadziriswazve.
Nyanga dze iPhone X ndidzo nyaya dzenharo nevatsigiri nevanozvidza zvakafanana asi chokwadi ndechekuti varipo kuti vagare
Iyi firimu Iyo Great Buddha, yakapfurwa pane iyo iPhone 6 Plus, yakaunganidza mazita gumi eGoridhe Horse paTaipei Film Festival.
Facebook inotanga neFace ID yekuvhura bvunzo
Iyo nyowani iPhone X ichawedzera iyo yekuzarura fomati nekutsvaga kumeso kwedu uye ino system ...
Samsung ichaita mari yakawanda nekuda kwekugadzira chete skrini yeApple iPhone X, inosvika $ 110 pachikamu
Iyo iPhone X ichave neReachability basa
Zvinotaridza kuti Reachability kana Nyore kusvika basa richaramba riripo muiyo X X kunyangwe paine kusahadzika kwekutanga nezvazvo.
Apple inotangisa "Mifananidzo Yake", iyo nyowani nzvimbo inoratidza Portrait Mwenje
Apple inonyorera muimbi Shannon Wise kubva kuThe Shacks kusimudzira iyo nyowani iPhone 8 Plus Portrait Mwenje.
Splitgate, pane chero munhu akafunga kuti iyi nyowani iPhone 8 ingadai isina gedhi rayo?
Uye ndizvo izvo, pane chero munhu akatenda kuti iyi nyowani iPhone 8 yaisazove neyayo "gedhi"? Ichi chinhu icho pasina mubvunzo ...
Iyo iPhone X yatove iine yayo yakasarudzika mushumo uye inowana chiyero chegoridhe muEPEAT
Isu hatisati tine iyo nyowani iPhone X modhi inowanikwa, tinogona kana kuichengetedza, asi vakomana vanobva kuCupertino vatove ...
Nezve runyararo rwekunze munzeve yeiyo iPhone 8, iyo Cupertino kambani yakabvuma uye isu tinofungidzira kuti hazvizotora nguva kugadzirisa.
Nyaya dzekugadzira dzinoenderera pa iPhone X
Dambudziko rekupedzisira iro rakabatana nekugadzirwa kweiyo iPhone X ndiyo chaiyo iyo 3D sensor inozviratidza, ichinyanya kukanganisa stock yayo yekupedzisira.
Tiri mune inonakidza nguva kana iwe ukatarisa runyerekupe nezvekutengeswa kweiyo iPhone 8 uye iyo iPhone ...
Isu tinoongorora zviitiko zveMophie uye mabhesheni anotibvumidza kunakidzwa nechaji isina waya paPhones dzisingatsigire
Tenaa yaizosimbisa iyo 3GB ye RAM uye 2.716mAh ye iPhone X bhatiri
Iyo itsva iPhone X ine vashandisi vazhinji vakamirira kuchengetedza uye iyi modhi nyowani ye ...
Kukurumidza kuchaja kweiyo nyowani iPhone kunogoneka ne USB-C majaja kubva kuApple uye mamwe mabrandi ayo atichengetedze mari yakanaka
Iwo maspika stereo pakati peiyo iPhone 8 anga avandudzwa ne25% pamusoro peyaakatangira, iyo iPhone 7. Iyi ndiyo yekupedzisira bvunzo.
Kugadzirisa girazi rekumashure reiyo iPhone 8 kunodhura kupfuura iyo skrini
Zvichaita marii kugadzirisa girazi kumashure kweiyo iPhone 8? Zvinoenderana nemitengo yakaburitswa yazvino, zvichadhura kupfuura kugadzirisa sikirini.
Apple inopa zvikonzero zvisere zvekuti isu tide iyo itsva iPhone 8, dzese nhau dzeiyo nyowani Apple chishandiso chakaungana munzvimbo imwechete.
iPhone 8: kuongorora kwevhidhiyo uye kuongorora
Isu takaedza iyo nyowani iPhone 8 Plus. Zvakakosha here pamusoro peiyo iPhone X? Tsvaga ayo maficha uye akavandudzwa dhizaini negirazi kumashure.
Iyo itsva iPhone 8 ine 2 kana 3 GB ye RAM? iFixit inojekesa kwatiri neiyo Teardown
Hazvikundiki uye yega yega iPhone modhi inoonekwa pamusika inopfuura nepatafura yekushanda ye ...
Kubata zvisina kunaka iyo itsva iPhone 8, inogona kusvika papi?
Isu tatova neyekutanga "kushungurudzwa mavhidhiyo" akananga kune itsva iPhone 8 mamodheru uye iyi mhando ye ...
Iyo iPhone 8 Plus ine yakanakisa nhare mbozha yenguva yacho
Iyo bvunzo dzinoitwa neDxOMark siya iyo iPhone 8 uye 8 Plus seyakanakisa nhare mbozha munhoroondo, kupfuura mamwe ese.
Basa rekuita mafoni ekukurumidzira muIOS 11 rinotibvumidza kuti tifonere kusevhisi iyi tisingafanirwe kuvhura chishandiso.
Pasina kupokana, vese avo vanoda kutora iyo nyowani iPhone X mamodheru kutanga vachafanirwa kurwa ...
Iwo maBenchimaki ekutanga anobuda uye zvirokwazvo iyo iPhone 8 ndiyo inesimba kwazvo terminal mune zvakajairika mazwi ayo Apple yakatanga uye ichavhura muna 2017.
IPhone 8 uye iPhone X hazvienderane neT-Mobile's 600 MHz bhendi
Chekutanga pane zvese isu tinofanirwa kujekesa kuti ichi chinhu chinoitika chete muUnited States uye chete ne ...
Vanababa naanamai, isu tatova neyekutanga unboxing yeiyo iPhone 8 uye iPhone 8 Plus
Zvakanaka, nguva yakatarwa neApple kuendesa idzi nyowani iPhone 8 haisati yasvika zviri pamutemo uye vamwe vatove ...
Iyo iPhone 8 inoenderera ichipihwa munyika zhinji kuti isunungurwe pazuva rekutanga, zvese zvinoratidza kuti iyo iPhone X iri kutonhora kutengesa kwayo.
Zvikonzero zvinomwe zvinoita kuti iwe utenge kutenga iyo X X
Isu tinopfupisa izvo maficha ayo anoita kuti iwe udanane neiyo iPhone X uye izvo zvinogona kuita kuti ive inopfuura yakatengwa kutenga.
Vakomana vanobva kuCupertino vanowedzera mitengo yeinishuwarenzi yavo yepamusoro, AppleCare +, yeiyo nyowani iPhone X uye iPhone 8 Plus.
Sekureva kwevamwe vaongorori, purofiti iyo Apple ichaita kune yega yega iPhone X inotengeswa ichave yakaderera pane iya yemhando dzekare.
Federighi anoburitsa pachena zvakakosha nezve Face ID
Federighi anojekesa akakosha mazano pamusoro peiyo nyowani ID ID, senge kuti inoshanda nemagirazi ezuva kana kuvanzika kwedata redu.
Iyo iPhone 8, 8 Plus uye iPhone X ndiyo chete mafoni epasirese anorekodha mu4k pa60 fps
Iwo ega mafoni emafoni anogona kurekodha mu4k mhando pa60 fps parizvino pamusika ndeye iPhone 8, 8 Plus uye iPhone X.
Face ID inoshanda kunyangwe ukapfeka magirazi ezuva
Apple nyowani Chiso ID kumeso kuzivikanwa chimiro chinoshanda nemazhinji magirazi ezuva pamusika.
Face ID tekinoroji inogumira kushandiswa kwe iPhone X kune munhu mumwe chete
Iyo yekuvhura tekinoroji yeiyo iPhone X inongobvumidza mumwe mushandisi kunyoresa, pane akati wandei neTouch ID sepakutanga.
Iwe unogona ikozvino kuchengetera nyowani iPhone 8 uye iPhone 8 Plus
Mangwanani ano isu takamuka neApple online chitoro chakavharwa uye izvi pasina mubvunzo yaive prelude kune izvo ...
Iyo inokodzera chaizvo kutengesa iyo iPhone 7 Plus yeiyo nyowani iPhone 8 Plus. Muchikamu chino tinokuratidza mutsauko uripo pakati pezviviri.
Mushure mekuvandudzwa kwemitengo uye nhanho dzeiyo iPhone isu tine dzimwe nhau dzakanaka, hazvina kumbobvira zvave nyore kuwana iPhone 7 Jet Nhema.
Kwangori mwedzi mishoma mushure mekumisikidzwa, Apple yakafunga kuburitsa zvachose iyo iPhone 7 (PRODUCT) RED pamwe nerose goridhe.
50% yebhatiri mumaminetsi makumi matatu chete, kuchaja nekukurumidza kunosvika kune iyo iPhone
Iyo iPhone 8 uye iPhone X vanozokwanisa kuchaja 50% yebhatiri ravo mumaminetsi makumi matatu chete nekuda kwekukurumidza kuchaja kugona.